NISA oo miinada dhulka lagu aaso ku fashilisay gudaha Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaNISA oo miinada dhulka lagu aaso ku fashilisay gudaha Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Haayada sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay in ay fashiliyeen miinada dhulka lagu aaso oo ay Al-Shabaab gelisay degmada Heliwaa ee Muqdisho.
“Wada shaqayn dhaxmartay ciidamada Police-ka, NISA iyo shacabka degmada Heliwaa ayaa lagu fashiliyay miino ay argagixisadu galiyeen dhulka si ay shacabka Soomaaliyeed ugu dhibaateeyaan. Wada shaqaynta shacabka iyo laamaha amniga ayaa dhabarjab ku noqonaya,” sidaa ayaa NISA ku sheegtay qoraal ay soo dhiggeen boggooda Twitter-ka galabta oo Jimce ah.
Al-Shabaab ayaa mar walba miinooyinka dhulka lagu aaso la beegsata ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa howlgalka milatariga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) oo dagaal kula jira maleeshiyada.
Masuuliyiin Soomaali ah oo Kenya ay u diiday dal ku gal oo dib ugu soo noqday Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Masuuliyiin katirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasoo ay Kenya u diiday dal ku galka ayaa maanta oo Talaado ah dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, sida ay wararku sheegayaan. Isniintii, Kenya [...]